OMN: (Onk 25, 2020)Shawaa Baahaa Magaalaa Baatuutti, hidhamtoonni Siyaasaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOMN: (Onk 25, 2020)Shawaa Baahaa Magaalaa Baatuutti, hidhamtoonni Siyaasaa
OMN: (Onk 25, 2020)Shawaa Baahaa Magaalaa Baatuutti, hidhamtoonni Siyaasaa
OMN: (Onk 25, 2020)Shawaa Baahaa Magaalaa Baatuutti, hidhamtoonni Siyaasaa ajjechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa booda to’ataman mana hidhaa ‘Betesab Mammaariyaa’ jedhamu keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu hidhamaan achi turee hiikame OMN-tti hime.
Hidhamtootni ajjeefamuu Artist Hacaaluu booda magaalicha keessaa guuramanii hidhaman hedduun, ijoollee sabboontotaafi namoota quuqama qaban yeroo ta’u, sababni hidhamuu isaanii hoofkara uumameen wal qabsiisuun ta’uus irra caalaan isaanii guyyaa Hacaaluun ajjeefame magaalicha keessa kan hin turedhas jechuun namni kun OMN-tti himeera.
Guyyaa gaafa hidhamanii qabanii hanga har’aatti utuu mana murtiitti hin dhihaatin kan jiran waan ta’eef yeroo mirga ofiif poolisii gaafatan, ‘dhimmi keessan federaalatti ilaalama’ jechuun yaadicha harkatti kuffisu’ jechuun namni hidhaatii hiikame kun OMN-tti hime.
Hidhamtoota Siyaasaa kanneen keessa Dubartoonni 6 kan jiran yoo ta’u, isaan keessaa tokko yeroo hidhamte Ulfa waan turteef, torbaan dura waldhaansaafi deggersa ogeessaa malee mana hidhaa keessatti deesse jirti. Deessuun kana dabalatee, hidhamtoonni marti rakkina bishaan dhugaatiifi soorataa hamaa akka qabanis nama kanarraa odeeffanneerra.Shawaa Baahaa Magaalaa Baatuutti, hidhamtoonni Siyaasaa ajjechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa booda to’ataman mana hidhaa ‘Betesab Mammaariyaa’ jedhamu keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu hidhamaan achi turee hiikame OMN-tti hime.
Hidhamtoota Siyaasaa kanneen keessa Dubartoonni 6 kan jiran yoo ta’u, isaan keessaa tokko yeroo hidhamte Ulfa waan turteef, torbaan dura waldhaansaafi deggersa ogeessaa malee mana hidhaa keessatti deesse jirti. Deessuun kana dabalatee, hidhamtoonni marti rakkina bishaan dhugaatiifi soorataa hamaa akka qabanis nama kanarraa odeeffanneerra.
#Shaashamanneen Goolama Keessa Jirti!
Ajjeechaan Dargaggoota Irratti Xiyyeffatee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru,